Vonona ny handray ny Papa Francois i Madagasikara amin’ny taona 2019 – Sénat de Madagascar
July 12, 2018 RAMBELO Abel NIRINA
NotanterahIna tetsy amin’ny EKAR Md Francois Xavier Antanimena ny harivan’ny 11 jolay 2018 ny fotoam-pivavahana lehibe izay Eokaristia voalohany fandraisana ny Kardinaly Désiré Tsarahazana TETO amin’ny diosezin’Antananarivo.
Nitarika ny lamesany voalohany teto amin’ny diosezin’Antananarivo ny kardinaly vaovaon’ny Madagasikara tao aorinan’ny fanamasinana ny maha Kardinaly azy, ary ny tenin’ny soratra masina izay hita tao amin’ny Bokin’ny Romana 12, 1-21 « Aza mety ho resin’ny ratsy, fa reseo amin’ny soa ny ratsy » no tenin’Andriamanitra nentina tamin’izany, izay teny notazoniny nanomboka izy Pretra hatramin’ny maha Kardinaly azy. Tonga nanotrona ity Lamesa lehibe ity ny Filoham-pirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA mivady, ny Praiminisitra NTSAY Christian mivady, ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO mivady sy ireo olo-manan-kaja maro ary ireo mpitarika fiangonana sy ny mpino Katolika .
Nandritra io Lamesa io ihany koa no nisaorana ny Filoham-pirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA amin’ny fahavononan’i Madagasikara handray ny Papa François amin’ny taona 2019 ho avy izao. Nambara nandritra izany ihany koa fa voatendrin’i Papa François ho Filohan’ny Synodan’ny Eveka Katolika eto Afrika ny Kardinaly Désiré Tsarahazana. Amin’ny Alahady ho avy izao ny lamesa lehibe faharoa handraisana ity Kardinaly ity ao amin’ny diosezin’i Toamasina.